Covid-19 စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ၄.၀ မွေးဖွားမှုအတွက် Global Value Chains ပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ပါ။ မည်သည့်နိုင်ငံများသည်အလားအလာရှိသည့်အောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သနည်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်သူတို့ကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏မသေချာမရေရာမှုနှင့်ပြတ်တောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုသင်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြားဖူးခဲ့ဖူးသည်၊ အကျပ်အတည်းတိုင်း (၉/၁၁၊ ၂၀၀၂ SARS, ၂၀၀၈ ဘဏ္melာရေးပြိုလဲခြင်း) သည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ အကျပ်အတည်းများအတွက်တရုတ်စကားလုံး“ weiji” (危机) သည်အန္တရာယ်သာမကအခွင့်အလမ်းကိုပါကိုယ်စားပြုသည်။ အစောပိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများသည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြန့်နှံ့နေစေသော်လည်းဤအရာသည်ထပ်မံဖြစ် ဦး မည်လော။ အကယ်၍ ဟုတ်လျှင်မည်သူသည်မည်သူကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်နည်း။
အဆိုပါသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကမ္ဘာလူ့အဖွဲ့အစည်းအမြဲပထဝီနိုင်ငံရေး, ဘဏ္Financialာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးခဲ့ရသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကာလလွန်ကဲ။ စီးပွားရေးအသစ်များသို့ဘဝအသစ်တစ်ခုကို ၀ င်ရောက်စဥ်းစားနေစဉ်“ ကြိုးမဲ့ကမ္ဘာ” တစ်လျှောက်ရှိဖိစီးမှုများကိုလွှဲပြောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ Covid-19 သည်စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးပြီးကတည်းကအဆိုးရွားဆုံးသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြိုကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသောရေနံစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
တရုတ်သို့ FDI သည်တောင်ဘက်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ၂၄.၄% နည်းပါးကြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းရှိပြီးသားနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း 24.4 ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ COVID-19 လက်အောက်ရှိအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ လျှပ်စစ်စက်ယန္တရားများနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၊ ပလတ်စတစ်များနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်မှုများခံစားခဲ့ရသည်။
တရုတ် - ၂၀၁၇ Aprilပြီလမှ ၂၀၂၀ Aprilပြီလအထိတင်ပို့မှု၏လစဉ်တန်ဖိုး (ဘီလီယံဒေါ်လာဖြင့်)
ဘောဂဗေဒပညာရှင်အများစုကတရုတ်ပို့ကုန်မှာ ၁၅% (aပြီ ၂၀) ပြုတ်ကျလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာများစွာသောသူတို့ကအံ့ surprised သွားကြတယ် ပို့ကုန် ၃.၅% မြင့်တက်ခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က.
ဤကပ်ရောဂါ၏မူလအစနှင့်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းများစွာသောသူတို့သည်ကမ္ဘာ့စက်ရုံကြီးတရုတ်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံသည်ပြီးဆုံးပြီဟုခန့်မှန်းရာတွင်သတိကြီးစွာထားရန်လိုအပ်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် SARS ပြတ်တောက်မှု (Covid 2002 နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်း) ကာလအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျီဒီပီတွင်တရုတ်၏ရှယ်ယာသည် ၄% ရှိပြီး၊ 19 တွင်ကမ္ဘာ့ဂျီဒီပီ၏ ၂၀% ခန့်ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုပြောတယ်။
၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုပြောင်းလဲရန်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည်ပိုမိုပါးလွှာလာပြီးလုပ်အားခဈေးပေါသောနေရာတွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပြောင်းလဲလာသည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်နိုင်ငံများစွာရှိထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော Global Value Chains (GVCs) ပုံစံကိုပြသည်။ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် GVC များအသုံးပြုသောအမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အကောင်းဆုံးသောသွင်းအားစုများရှာဖွေပေးခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးမြင့်မားသောအလယ်အလတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးရင်းမြစ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဥရောပ၏အချို့သောဒေသများရှိပျမ်းမျှတရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်အားခသည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး“ ကုန်ကျစရိတ်” ၏ယုတ္တိဗေဒကိုအလေးအနက်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ထို့အပြင် SARS သို့မဟုတ် Japan ရှိ Tohoku ငလျင်ကဲ့သို့သောပြတ်တောက်မှုများကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်မှုကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းကကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးအားထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ COVID-19 သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဤအန္တရာယ်ကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အာရှနှင့်ကမ္ဘာတလွှားရှိစက်ရုံများသို့သွင်းအားစုများအဖြစ်တရုတ်သည်မည်မျှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်.
မကြာသေးမီကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အရေးပါသောစကားလုံးတစ်လုံးသည်“ ခံနိုင်ရည်” ဖြစ်သည်။ ကြံ့ခိုင်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်သည်အခြားအရင်းအမြစ်များမှထောက်ပံ့မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြတ်တောက်စေသောအစောပိုင်းလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးသည်။ ခံနိုင်ရည်, သို့သော်, ထိရောက်မှုနှင့်အတူအပေးအယူဖြစ်ပါတယ်။ Covid ရောဂါကူးစက်မှုသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်အလွန်ကျိုးပဲ့သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကအမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကရှေ့ကိုရှေ့တိုးသွားတဲ့“ စွန့်စားမှု” နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များပြတ်တောက်ခြင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသွင်းအားစုများကိုအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ခံနိုင်ရည်, သို့သော်, ထိရောက်မှုနှင့်အတူအပေးအယူဖြစ်ပါတယ်။ Covid ရောဂါကူးစက်မှုသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်အလွန်ကျိုးပဲ့သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များဖြစ်ပေါ်စေပုံကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Covid-19 သည်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ အငြင်းပွားမှုများကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဤအကျပ်အတည်းသည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောလမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်ခြင်းနှင့်အခွန်နှုန်းထားတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အန္တရာယ်နည်းပါးသောစျေးကွက်များရရှိရန်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှသူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးအခြေအနေကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏ဥများအားလုံးကိုအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်တောင်းထဲထည့်မည့်အစားသူတို့၏အန္တရာယ်များကိုပြန့်ပွားစေရန်ပညာရှိနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ရှေ့ဆက်သွားရန်မှာစွန့်စားမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချကာကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၏ခံနိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်များကို ထပ်မံ၍ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အမျိုးမျိုးနှင့်“ ခွဲထုတ်ခြင်း” လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည် Kearney ယူအက်စ်အညွှန်းကိန်း (USRI). Reshoring အညွှန်းကိန်းသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစဉ်အလာအရအာရှတန်ဖိုးနည်းနိုင်ငံ ၁၄ ခုမှတင်သွင်းမှုအဆင့်နှင့်တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ Kong, သီရိလင်္ကာနှင့်ကမ္ဘောဒီးယား။
Kearney USRI က 2019 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်အာရှတိုက်ရှိကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သောနိုင်ငံ (၁၄) နိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကြီးမားစွာရှယ်ယာများရရှိခဲ့ပြီးတရုတ်မှထုတ်လုပ်မှုတင်သွင်းမှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။
တရုတ်မှကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုအခြားအာရှ LCC များသို့ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားသည်မှာအတော်အတန်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈-၁၉ တွင်အမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်ခဲ့သည် ရလဒ်အနေဖြင့်အာရှကုန်သွယ်မှုဟန်ချက်ညီမှုအသစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အသစ်သောကမ္ဘာ့အမိန့်ကို Covid 19 အပြောအဆိုနှင့်အတူ conjugation Trump ရဲ့မကြာသေးမီကကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်လာမည့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၏အလငျး၌ထ drummed ရှိနေသောကြောင့်မျှော်လင့်ထားထက်ကြာကြာနေရန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
၂၀၁၈-၁၉ အတွင်းတရုတ်မှအမေရိကန်မှသွင်းကုန် ၁၇% (ဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလီယံ) ကျဆင်းခဲ့သည်။ အလားတူကာလအတွင်းအခြားအာရှ LCC စျေးကွက်များမှအမေရိကန်တင်သွင်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလီယံနှင့်မက္ကဆီကိုမှတင်သွင်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
Covid 19 ၏တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုသည်မလွယ်ကူပါ။ အဓိကကမ္ဘာ့စီးပွားရေးများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံမှရွှေ့ပြောင်းရန်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားနေခြင်း ဥရောပအုပ်စုသည်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်မှီခိုနေရမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ထို့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဝေးကွာသောနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့လိုသောကုမ္ပဏီများအားဒေါ်လာ ၂.၂ ဘီလီယံထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
“ တရုတ် + ၁” မဟာဗျူဟာ
ရေရှည်တွင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အမျိုးမျိုးကိုမလွှဲမရှောင်သာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းတရုတ်သည်မဝေးတော့သောကာလတွင်အဓိကကုန်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ Coronavirus သည်ကမ္ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတရုတ်နိုင်ငံမှစတင်ခဲ့လျှင်ပင်အာရှစီးပွားရေးfromရာမနှင့်ဝေးကွာသောနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
Covid 19 ပိတ်ဆို့မှုအပြီးတွင်စီးပွားရေးပြန်လည်စတင်ရန်တရုတ်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဆင့်ထက်ရှေ့တွင်ရှိနေသည်ဟူသောအချက်ကိုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအခြားနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရာတွင်စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ယုတ္တိနည်းအရတရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ခွာခြင်းသည်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်မည်မဟုတ်ပေ။
ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမှုအတွက်ရှုပ်ထွေးစေသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နိုင်ငံများစွာသည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက်တရုတ်ကိုမှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။။ ထိုသို့သောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုကြည့်ရှုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံ၏အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆိုအကဲဖြတ်ရပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ မတ်လ ၂၀ ရက် PwC နှင့်တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့မှစစ်တမ်း (AmCham China) ကုမ္ပဏီ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က COVID-70 ကြောင့်တရုတ်ပြည်ပြင်ပတွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များပြန်လည်နေရာချထားရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဝန်ခံကြသည်။
ကုမ္ပဏီများသည်တရုတ်၌ခိုင်မာသောတည်ရှိမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အခြား LCC များရှိသူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးအခြေစိုက်စခန်းကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောနည်းဗျူဟာကိုချမှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို“ China + 1” မဟာဗျူဟာအဖြစ်ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီများသည်တရုတ်၌ခိုင်မာသောတည်ရှိမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အခြား LCC များရှိသူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးအခြေစိုက်စခန်းကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောနည်းဗျူဟာကိုချမှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို“ China + 1” မဟာဗျူဟာအဖြစ်ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းရည်ရှိသောနိုင်ငံများအားလေ့လာရန်လုံလောက်သောအချိန်ပေးရုံသာမကတရုတ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်သြဇာသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။
သို့သော်အနာဂတ်သည်အခြားသူများထက်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည့်အနည်းဆုံးကဏ္ sector တစ်ခုရှိသည်။ "ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ" ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည်ပantibိဇီဝဆေးများအတွက်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ၉၀% နီးပါးကိုထုတ်လုပ်သည်။ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများသည်ယေဘုယျဆေးဝါးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်စီးပွားရေးနှင့်အစိုးရများ၏တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အလွန်အရေးကြီးသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရများသည်တရုတ်ကိုရေရှည်တည်တံ့မည့်အစားထိုးရှာဖွေမှုများပြုလုပ်လာသည်နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သောဖွံ့ဖြိုးဆဲအာဆီယံနိုင်ငံများသည်အကျိုးရှိသည်။
၂၀၁၈-၁၉ တွင် FDI သည်အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးအဓိကအောင်မြင်သူမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့်ဖိလစ်ပိုင်၊ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်နှင့်အီသီယိုးပီးယားတို့သည်ပြိုင်ဘက်များအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဗီယက်နမ်သည်တရုတ်နှင့်အနောက်တိုင်းကမ္ဘာသို့တူညီသောရေကြောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတူသောကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအနေအထားတွင်ရှိသည်။
coronavirus အပေါ်ဗီယက်နမ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကြားတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အစိုးရ၏အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်မှုများသည် (ဇွန်လ ၁ ရက်မှ ၂၀ အထိ) တက်ကြွသောအမှုပေါင်း ၄၀ ထက်နည်းစေပြီး Covid-40 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သေဆုံးမှုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်သေးပါ။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအစောပိုင်းအဆင့်၌ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ရုံသာမက ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းအရှေ့တောင်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည့်စီးပွားရေးနိုင်ငံများစာရင်းတွင်ခန့်မှန်းထားသည်။ အကြောင်းမရှိ။
အမေရိကန်မှသွင်းကုန်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလီယံအနက်တရုတ်မှအခြားအာရှ LCC နိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောထက်ဝက်နီးပါး (၄၆%) သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ၀ ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခဲ့သည် - KEARNEY
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်သည်စက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားအထည်အလိပ်နှင့်အထည်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သည်တရုတ်နိုင်ငံထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့နည်းနေသည့်အပြင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဥပမာအက်ပဲလ်ကဲ့သို့သောအခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများတည်ထောင်ရန်အစီအစဉ်များ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘောဒီးယားသည်ဂျီဒီပီတိုးတက်နှုန်း (~ ၇%) ရှိခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင်ကမ္ဘောဒီးယားသည်အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အမေရိကန်သည်တရုတ် - အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်လည်ကိန်းဂဏန်းများတွင် ကမ္ဘောဒီးယားသည်အမေရိကန်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုဒေါ်လာ ၄.၈၅ ဘီလီယံ ရှိ၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈၈ ဘီလီယံဖိုးရှိသည်.
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတွင်စိုးရိမ်စရာအကြောင်းများရှိသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၏စီးပွားရေးသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အလွန်ပွင့်လင်းသော်လည်း၊ ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုမှာတရုတ်မှဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများကိုဝေးကွာစေနိုင်သည့်အခြားအကြောင်းရင်းများစွာရှိသည် - နိုင်ငံ၏စျေးကွက်အငယ်စား၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အားနည်းပါးခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံမလုံလောက်ခြင်း (စွမ်းအင်မြင့်မားမှုအပါအ ၀ င်) နှင့်အစိုးရ၏အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း။
တစ် ဦး ကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်တို့ထက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အားသာချက်များရှိသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားတွင်စက်ရုံများတည်ထောင်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည်ကမ္ဘောဒီးယားလူ ဦး ရေ၏ ၁၀ ဆခန့်ရှိပြီးသန်း ၁၆၀ ရှိကာအလုပ်သမားထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောစွန့်စားမှုများလျော့နည်းစေသည်။ ယင်းသည်ဗီယက်နမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစျေးပေါသောလုပ်အားနှင့်အတူတကွဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းပိုစေသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၈၀ ထက်ဝက်နီးပါးရှိသောဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်အနည်းဆုံးလုပ်ခကိုတစ်လလျှင် ၉၅ ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
သို့သော်ကုမ္ပဏီများအတွက်သတိထားရမည့်အချက်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံများပြိုလဲခြင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်းကျင်ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အကဲခတ်လေ့လာသူများကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှတရုတ်ထံမှအလွန်အကျွံနှင့်မဆင်မခြင်ချေးငှားခြင်းသည်အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်ရေရှည်တွင်ကြွေးမြီထောင်ချောက်ကျစေနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ကြသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ၏အကြီးဆုံးစီးပွားရေးအတွက်အားဖြည့်ဂလိုဘေးတန်ဖိုးကွင်းဆက်အမျိုးမျိုးကိုအားဖြည့်သင့်သည်။ သို့သော်၎င်း၏ SEA အိမ်နီးချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအင်ဒိုနီးရှားသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်အတော်လေးဆွဲဆောင်နိုင်မှုမရှိသေးပါ။ OECD အရ FDI ၏တင်းကျပ်မှုအညွှန်းကိန်းတွင်အင်ဒိုနီးရှားသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်ဖိလစ်ပိုင်သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
FDI အပေါ်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအားနည်းခြင်းနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အခြားစီးပွားရေးနေရာများရှာဖွေရန်တရုတ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ၃၃ ခုကအင်ဒိုနီးရှားကိုကျော်ဖြတ်သွားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အဆိုအရအင်ဒိုနီးရှား၏နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလားအလာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရှေ့နောက်မညီမှုများစွာကိုညွှန်ပြသည်။
Jokowi အစိုးရအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ပြaticနာဟုယူဆရသောဥပဒေ ၇၉ ခုမှဆောင်းပါး ၁၂၀၀ ကျော်အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် Omnibus ဥပဒေအသစ်အားစည်းမျဉ်းအဝလွန်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤဥပဒေကြမ်းသည်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လိုချင်သောနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအထိလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းမှမူဝါဒနယ်ပယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သို့သော်စည်းမျဉ်းမူဘောင်အတွင်းရှိရှုပ်ထွေးနက်ရှိုင်းမှုကြောင့်ဤမကြာသေးမီကကြိုးပမ်းမှုများသည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည်“ တရုတ်ပြည်နှင့်မတူကွဲပြားသည့်” လမ်းကြောင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေသည့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်မဖြစ်နိုင် တိုးတက်မှုများ။ ဒီအကောင်းမြင်မှုကြောင့် CEOworld ဟာ Covid4ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားကိုအဆင့် ၄ နေရာမှာရှိနေစေခဲ့ပါတယ်။
'ပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် Facebook သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော Reliance Industries မှထိန်းချုပ်ထားသည့် Jio Platforms တွင်ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလျံဒေါ်လာဖြင့်အကြီးမားဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤသည်မှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီအပေါ်ကြီးမားသောလောင်းကြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယ၏ FDI ရှုခင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ Apple နှင့် Amazon တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်အိန္ဒိယတွင်သူတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများကိုတိုးချဲ့နေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ပြေးလာသောထုတ်လုပ်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရသည်ကဏ္ 462,000 ၁၀ ခုအတွက်လျာထားသောဟက်တာ ၄၆၂၀၀၀ (လူဇင်ဘတ်၏အရွယ်အစားနှစ်ဆ) တွင်မြေpoolရိယာကိုတည်ဆောက်နေသည်။ လျှပ်စစ်၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးပစ္စည်း၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အင်ဂျင်နီယာအကြီးစား၊ နေရောင်ခြည်သုံးကိရိယာ၊ အစားအစာပြုပြင်ခြင်း၊
အမျိုးမျိုးသောစိန်ခေါ်မှုများရှိသော်ငြားအိန္ဒိယသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သယံဇာတရှာဖွေခြင်းအတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်ထူးခြားသောအားသာချက်များရှိသည်။ UNDP ၏အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရအိန္ဒိယတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအသက်အရွယ်လူ ဦး ရေ ၁.၁၄ ဘီလီယံရှိလိမ့်မည်။ ၂၀၂၅ တွင်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူလတ်တန်းစားလူ ဦး ရေတိုးပွားလာမည်၊ အိန္ဒိယ၏ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏စီးပွားရေးလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ညွှန်းကိန်း (၇၇) မှ (၆၃) ခုမြောက်အဆင့်သို့တက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်တွင်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
UNDP ၏အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရအိန္ဒိယတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအသက်အရွယ်လူ ဦး ရေ ၁.၁၄ ဘီလီယံရှိလိမ့်မည်။ ၂၀၂၅ တွင်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူလတ်တန်းစားလူ ဦး ရေတိုးပွားလာမည်။
သို့သော်အိန္ဒိယ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ ((အိန္ဒိယ၏ဂျီဒီပီ၏ ၁၆%) သည်အကျပ်အတည်းများစွာရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွင်အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်မူဝါဒများ၊ အလုပ်သမားစည်းမျဉ်းများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများ၊
အခွင့်အလမ်းပြတင်းပေါက်သည်ကျဉ်းမြောင်း။ အိန္ဒိယ၏အနာဂတ်သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းရွေးချယ်မှုများအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးနိုင်ငံများကသူတို့၏တိုင်းပြည်၏အမြင်အသစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက်အကျပ်အတည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအတွက်အိန္ဒိယအနေဖြင့်ရေရှည်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်မူဝါဒဖြစ်စဉ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ရန်လိုသည်၊ FDI ဒီရေသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မလေးရှား၊
အိမ်သို့ PRODUCTION ပိုမိုနီးကပ်စွာယူလာ
coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးပျက်စီးမှုများသည် MNC များကိုသိုလှောင်ရုံများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အခြားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်အိမ်နှင့်နီးကပ်စွာဖြင့်သူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်ဖောက်သည်များအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ရန်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖြန့်ကျက်မှုကိုလည်းတိုးချဲ့မည်။
အမေရိကန်ဗဟိုပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, မက္ကဆီကို (အမေရိကန်၏အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်) သည်ယုတ္တိနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ Mazda သည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအချို့ကိုတရုတ်မှမက္ကဆီကိုသို့ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဥရောပစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်မော်ရိုကို၊ တူနီးရှားနှင့်အီဂျစ်တို့ကိုအပြိုင်အဆိုင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဖြစ်အသုံးချနိုင်သည်။
လာမယ့်တစ်နှစ်တောရိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်! Adaptive အရှိဆုံးသူကတော့ Smartest ဒါမှမဟုတ် Strongest မဟုတ်ဘဲရှင်သန်သွားမှာပါ။ Covid 19 နောက်ပိုင်းတွင်“ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ၄.၀” ပေါ်ထွက်လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်ဤကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုမျိုးတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ၊ ကမ္ဘာကြီးသည် ပို၍ သာယာသာသာသာဖြစ်လာသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုမူလက ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂ ရက်တွင် LinkedIn တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ရောင်းချသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဝယ်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | နိုင်ငံတကာစျေးကွက်လည်ပတ်မှု | နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှိနေခြင်း | နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | အခမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်း | လူအင်အားန်ဆောင်မှုများ